Imbali kunye neJografi yasePuerto Rico
Inkcazo emfutshane yeSithili sase-US
IPuerto Rico iyisiqithi esisempuma ye-Greater Antilles eLwandle lweCaribbean, malunga neekhilomitha ezili---mpuma kumzantsi-mpuma weFlorida kunye nje empuma yeRiphablikhi yaseDominican kunye nasentshonalanga yeZiqithi zase-Virgin zase-US. Esi siqithi sinobubanzi malunga neekhilomitha ezingama-90 kummandla osempuma-ntshona-ntshona kunye neekhilomitha ezingama-30 ububanzi phakathi kweendawo ezisentla nezantsi.
I-Puerto Rico yintsimi yase-United States kodwa ukuba ithe yaba yindawo, indawo yasePuerto Rico yeekhilomitha ezili-8,897 km2 yayiza kuba yindawo engama-49 enkulu kunazo zonke (inkulu kuneDelaware neRhode Island).
Iindawo ezisemaphandleni asePuerto Rico zithe cwaka kodwa ininzi yendawo yangaphakathi iyintaba. Intaba ende kunazo zonke ziphakathi kweso siqithi, iCroro de Punta, eneemitha ezi-4,389 eziphakamileyo (1338 metres). Phantse iipesenti ezisibhozo zelizwe lihlaselwe ezolimo. Ukomquba kunye neempukane ziyizingozi ezinkulu zemvelo.
Kukho malunga nezigidi ezine zasePuerto Ricos, ezenza isi siqithi se-23 sinabantu abaninzi (phakathi kwe-Alabama neKentucky). I-San Juan, inkulu-dolophu yasePuerto Rico, isecaleni lasenyakatho yesiqithi. Inani labantu besiqithi likhulu kakhulu, malunga nabantu abayi-1100 kwiyhilomitha nganye (abantu abangama-427 kwikhilomitha nganye).
IsiSpanish yilwimi oluphambili kwisiqithi kunye nexesha elincinci kwangaphambili kule minyaka elishumi, kwakukho ulwimi lwaseburhulumenteni olusemthethweni. Nangona abaninzi basePuerto Ricans bathetha isiNgesi, malunga nekota kuphela kubemi beelwimi. Ubemi ngumxube weSpain, waseAfrika kunye nelifa lemveli.
Phantse ezisixhenxe-isibhozo zasePuerto Ricans ngamaRoma Katolika kunye nokubhala nokubhala nokubhala nokubhala nokubhala nokubhala nokubhala nokubhala nokubhala nokubhala nokubhala nokubhala nokubhala nokubhala nokubhala nokubhala nokubhala nokubhala nokubhala nokubhala nokubhala nokubhala nokubhala nokubhala nokubhala nokubhala nokubhala nokubhala nokubhala nokubhala nokubhala nokubhala nokubhala noku Abantu baseArawakan bahlala kwisiqithi malunga nekhulu lesi-9 CE. Ngowe-1493, uChristopher Columbus wafumanisa isiqithi waza wayitsho iSpain. IPuerto Rico, oko kuthetha ukuba "ichweba elityebi" ngesiSpanish, alizange lilungiswe kude kube ngu-1508 xa iPonce de Leon yasungula idolophu kufuphi neSan Juan yanamhlanje.
IPuerto Rico yahlala i-coloni yaseSpain iminyaka engaphezu kwezine ukuya kwaze kwaba yilapho iUnited States yahlutha iSpeyin kwimfazwe yaseSpain-Amerika ngo-1898 kwaye yayihlala kwisiqithi.
Kwada kwaphakathi kwekhulu lemashumi mabini, isiqithi sasiyinto ehluphekileyo kwiCaribbean. Ngowe-1948 urhulumente wase-United States waqalisa u-Operation Bootstrap owafaka izigidi zeedola kwizoqoqosho zasePuerto Rican waza wenza enye yezona zicebile kakhulu. Amafemu ase-United States asePuerto Rico afumana izibonelelo zentlawulo zokukhuthaza utyalo-mali. Amaninzi angaphandle aquka amayeza, i-electronics, isambatho, i-sugar, kunye nekhofi. I-US ngumlingani omkhulu wezorhwebo, u-86% wezinto ezithunyelwa ngaphandle athunyelwa kwi-US kwaye i-69% yezizwe ezivela ngaphandle zivela kumazwe angama-50.
Abantu basePuerto Ricans babe ngabemi baseUnited States ekubeni umthetho wenziwa ngowe-1917. Nangona bebemi, abantu basePuerto Ricans abahlawulanga irhafu yengeniso yombuso kwaye abanako ukuvota umongameli. Ukufuduka kweMelika yasePuerto Ricans ngokungavumelekanga kwenze iNew York City ibe yindawo enye kunye nabantu basePuerto Ricans apho bekhona kwihlabathi (ngaphezulu kwesigidi esisodwa).
Ngowe-1967, 1993, no-1998 abemi besiqithi bavota ukugcina isimo semeko. NgoNovemba 2012, abantu basePuerto Ricans bavotela ukuba bangagcinanga isimo se-quo baze baphishekele i-statehood nge-US Congress.
Ukuba iPuerto Rico yayiza kuba yindawo engamashumi amahlanu-yokuqala, urhulumente waseburhulumenteni wase-US kunye ne-state-to-be iya kuseka inkqubo yenguqu ye-10 kwinkqubo yenkqubo. Urhulumente wenkonzo kulindeleke ukuba achithe malunga neebhiliyoni ezintathu zeedola ngonyaka kwilizwe malunga neenzuzo ezingakhange zifunyenwe yi-commonwealth njengamanje. Abantu basePuerto Ricans baqala ukuhlawula irhafu yengeniso ye-federal kunye nezoshishino ziya kulahla ukuxolelwa kweerhafu ezikhethekileyo eziyinxalenye enkulu kwezoqoqosho. Urhulumente omtsha mhlawumbi uya kufumana amalungu amathandathu okuvota eNdlu yabameli kunye nanjalo, ii-Senators ezimbini. Ienkwenkwezi kwiiflethi zaseMelika ziza kutshintsha okokuqala ngqa kwiminyaka engama-50.
Ukuba ukuzimela kwakhethwa ngabantu basePuerto Rico kwikamva, iUnited States iya kunceda eli lizwe elitsha ngexesha elineshumi eliguqukayo.
Ukuqatshelwa kwamanye amazwe kuya kufika ngokukhawuleza kuhlanga olutsha, oluya kuphuhlisa ukuzimela kwalo kunye noorhulumente omtsha.
Nangona kunjalo, okwangoku, iPuerto Rico ihlala yintsimi yaseUnited States, nayo yonke into enobudlelwane obunjalo.
IJografi kunye noBume beChile
Ukubala ngeNombolo engenziyo
Umyalelo weeNkqubo zokuSebenza zoMsebenzi - kunye nabazali - akukho baxhasi (6 Iifishishithi zokusebenzela)
Ngaba Kukhona Imimiselo Ekhethekileyo Yokusingatha iKuran?
Emile Durkheim kunye neNdima Yakhe kwiMbali yezoLuntu
Iingoma ezi-10 ezidlulileyo zeeNgoma ze-2015
Randy Travis '' Uzuko lweeTranshini - iingoma zokholo, ukukhonza nokudumisa '
Ulwabelana ngesondo kunye nokuzaliswa kwezesondo
Iindawo eziphakamileyo kunazo zonke eUnited States
Indlela Yokuba Umfundi Ocebileyo
Izibhengezo zonyaka omtsha zesiFrentshi
Uninzi Kangakanani Amanzi I-Vapor Esemhlabeni?
Umfazi Wokuqala Ukuvota - Abamangali